अस्पतालको लापर्बाहीले ज्यान गएको भन्दै गण्डकी केडिकल कलेजमा पीडित पक्षव्दारा नारबाजी – ebaglung.com
अस्पतालको लापर्बाहीले ज्यान गएको भन्दै गण्डकी केडिकल कलेजमा पीडित पक्षव्दारा नारबाजी
२०७४ कार्तिक १८, शनिबार १८:३३	Top News, थप समाचार
कविता घर्तीमगर , पोखरा २०७४ कात्तिक १८ । पोखरामा पछिल्लो क्रममा निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अस्पतालको लापर्बाहीले आफन्तको ज्यान गएको भन्दै आन्दोलन र ढुंगामुढा तथा नारा बाजी गर्नेक्रम निकै फस्टाउदै गएको छ । त्यस्तै अस्पतालको लापरबाहीले सुत्केरीको ज्यान गएको भन्दै आक्रोशित आफन्तले गण्डकी मेडिकल कलेज नयाँ बजार अगाडि शनिबार पनि प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबारदेखि नै आन्दोलित उनीहरु शनिबार मध्यान्ह नयाँबजार सडक नै बन्द गरी टायर बालेर अस्पताल, प्रशासन र प्रहरी विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएको हो ।
शल्यक्रिया मार्फत छोरो जन्माएकी स्याङ्जा अर्जुनचौपारी १ की गीता अर्याललाई शुक्रबार बिहान ५ बजे अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो । १९ वर्षीया अर्यालको मृत्यु अस्पतालको लापरबाहीले सुत्केरी हुँदैमा भएको र एक हप्तासम्म बेहोस् भन्दै घटना लुकाएको आफन्तजनको आरोप छ ।
गत कार्तिक १० गते शुक्रबार बेलुकी जिएमसी पुगेकी अर्यालले भोलिपल्ट शनिबार बिहान ११ बजे छोरो जन्माएकी थिईन् । त्यसपछि पाँच दिनसम्म बेहोस् अवस्थामा भेन्टिलेटरमा थिईन् । शुक्रबार अस्पतालले दिएको मृत्युको खबरपछि आक्रोशित आफन्तले कास्कीका सिडिओकहाँ ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन जाँदा अस्पतालसँग नै कुरा गर्नुस् भनेर नबुझी फर्काईदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
आफन्तजनले दोषी चिकित्सकलाई कारबाही, नाबालकको संरक्षणको जिम्मा र क्षतिपूर्ति नदिएसम्म शब नउठाउने बताएका छन्। शल्यक्रिया डा. टीका गुरुङको टीमले गरेको जेठाजु राजन अर्यालले बताए । तर अस्पताल प्रशासनले भने अस्पतालमा उपचार गराउने क्रममा विरामी मरेपछि क्षतिपुर्तिको माग गरी नाराजुलुस र आन्दोलन गर्ने चलन हावी भएकोले अस्पतालको केहि दोष नभएको बताएको छ । अस्पताल वरपर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।पर्वत लुंखुदेउराली माईत भएकी गीताको गत मंसिरमा मात्र बिहे भएको थियो ।
उनका श्रीमान् कृष्ण अर्याल वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा युएईमा छन् । गीता कक्षा १२ मा पढ्दै थिईन् । सकुशल जन्मेका छोरा पोखरा नागढुंगा स्थित आफन्तकहाँ छन् । अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्तबीच सहमति हुन सकेको छैन । सहमति नभएसम्म शव नबुझ्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
जीएसीमा मात्र होईन पोखरा लगाएत देशका अधिकांश स्थानका अस्पतालमा यहि समस्या छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील चिजमा विरामीको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले सत्यतथ्य जानकारी आफन्तलाई नगराएउदा दोषको आरोपमा आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक नै हो , तर आफन्तले पनि विरामीको प्रकृतिको बारेमा जानकार हुनुपर्छ । नत्र एउटा विरामी मान्छेलाई नयाँ जीवन दिलाउनको लागी हरदिन लागीपरेका डा. तथा अस्पताल प्रसाशनलाई मात्र दोष दिएर नाराबाजी गर्नु उचित हुदैन । यो विषयमा दुबैपक्षले संयमतालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।
गुल्मी रेसुङ्गाका बृद्धाहरुले भने–‘श्रीमान विते पनि बृद्ध भत्ता साहरा बनेको छ ’
काँग्रेसको प्रचार अभियान जलजलामा : राष्ट्रको बिकास चाहनेले काग्रेसलाई मतदान !